FIHAONANA NATAON-DRAVALOMANANA TOJO TAMIN’NY MPANAO GAZETY
Tao anatin’ny fo torotoro sy feno alehelo tokoa no nitafan’ny zanaky ny Filoha Ravalomanana, Tojo Ravalomanana, tamin’ny mpanao gazety teny amin’ny trano fonenany eny Faravohitra, androany Talata 14 Oktobra 2014 maraina.
Nambaran-dRavalomonana Tojo, fa iaharan’ny herisetra I Ravalomanana Marc, dadany. Mangataka ny hahita ny dadany tsy misy atak’andro ny tenany, ny reniny ary ny fianakaviany manontolo, ny mpisolovava azy ary ny dokotera mpanara-maso ny fahasalaman-dRavalomanana Marc.
Voalazan-dRavalomanana Tojo, fa ny alin’ny Alatsinainy 13 Oktobra 2014, dia nanatitra fanafody maromaro izay tokony ho hanin’ny Filoha Ravalomanana ny fianakaviany, niaraka tamin’io ihany koa ny fitafiana. Tsy afaka nahita maso an-drainy anefa izy fa ny mpitandron’ny filaminana no nandray ireo zavatra ireo. Tsy fantatra anefa na tonga soa aman-tsara any amin’ny Filoha Ravalomanana ny fanafodiny sy ny fitafiany, na tsia.
Mba hisian’ny filaminana dia mangataka fihaonana maika amin’ny Filoha Rajaonarimampianina Hery, I Neny Ravalomanana, hoy ihany Ravalomanana Tojo.
Tafitra ao anatin’ny fahantrana lalina I Madagasikara, tsy fahantrana ara-batana fotsiny ihany, fa fahantrana ara-tsaina ihany koa. Tsy misy intsony izany soatoavina maha-Malagasy izany eto Madagasikara. Hitondra ny anjara birikiny amin’ny fanpandrosoana no nahatongavan’I Dada Ravalomanana, kanefa dia izao iharan’ny herisetra izao, hoy ihany ny tenin-dRavalomanana Tojo.
“Mafy tena mafy izany hoe eo am-pisakafoana ianao no alaina an-keriny eo imasonao ny dadanao…”, hoy Ravalomanana Tojo. Tsy nisy fanoheranana nataon-dRavalomanana anefa nanoloana izany.
Toy izay amin’ny ankapobeny ny resadresaka nifanaovan-dRavalomanana Tojo, tamin’ny mpanao gazety. Ho hitantsika amin’ny manaraka eto ihany ny tohin’izao raharaha izao.